Global Voices teny Malagasy » FitorahanaBlaogy amin’ny tokony ho izy: Midira amin’ny Fifanakalozan-kevitra Malalaka momba ny VIH/SIDA · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Febroary 2009 7:40 GMT 1	 · Mpanoratra Juhie Bhatia Nandika avylavitra
Sokajy: Angletera, Filipina, Kenyà, Fahasalamàna, Hafanàm-po nomerika, Teknolojia
Ity andron'ny mpifankatia (14 Febroary) dia manamarika, tsy ny fiantombohan'ny fanentanana eto amin'ny Global Voices fotsiny ihany miantso ny olona mba “hampianatra ireo Olona Tiany hampiasa Blaogy na hampiasa ny Micro-Blog,”  fa ao koa ireo ainga maro samihafa mikasika ny hetsika ara-pahasalamana mitodika mankany amin'ny VIH/SIDA mba ho fandrisihana ireo olona maro tratry ny aretina na miaina miaraka amin'izany mba hampiasa blaogy.
Maherin'ny 33 tapitrisa ny olona  miaina mitondra ny otrikaretina VIH/SIDA, ary raha kely indrindra dia 2 tapitrisa no efa matin'ny SIDA tamin'iny taona lasa iny. Samy nametraka tantara momba ireo antontan'isa ireo daholo ireo mpitoraka blaogy eran-tany, toy ny hoe, mizara fijoroana vavaolombelona amin'izany hoe miaina miaraka amin'ny aretina izany, ny fandraisana an-tànana ny fikarakarana olona mitondra VIH/SIDA, sy ny zavatra niainana manoloana ny fanavakavahana sy ny fanamelohana imason'ny fiaraha-monina. Ireny blaogy ireny dia nanampy tamin'ny fanangonam-baovao mivantana momba ny donan'ny aretina amin'ny ankapobeny.
Santionan'ireo resaka miainga mikasika ny fitorahana blaogy manodidina ny olan'ny VIH/SIDA, Global Voices sy Rising Voices  dia hampiantrano ny resaka mivantana amin'ny alalan'ny aterineto “Fitorahana blaogy amin'ny tokony ho izy” ho an'ireo mpitoraka blaogy sy mafana fo ny andron'ny 27 Febroary 2009. Handridra ny fifanakalozan-kevitra ireo mpitoraka blaogy Keniana Serina Kalande  sy Daudi Were . Asaina daholo ny rehetra.
Efitra hifampiresahana: http://www.worknets.org/chat/ . Fomba fidirana mampiasa ny anaranao ka avy eo mifidy ny efitra tianao ho tsidihana amin'ny alalan'ny fanindrianao ny ‘enter’ ‘midira’. Rehefa tonga ao amin'ny efitra, fidio ery amin'ny sisin'ny fafana [écran] havia ery ny loko hataonao dia mandraisa anjara amin'ny resadresaka.
Misy Sarintany Google  azo asisika momba ny mpitoraka blaogy voamarina fa mitondra ny otrikaretina VIH sy ireo mpandray an-tànana ihany koa napetraky Global Voices, ary ireo loharanom-baovaon'olon-tsotra mivoy ny VIH/SIDA tamin'iny Desambra lasa iny ho toy ny singa amin'ny Andro maneran-tany iadiana amin'ny SIDA . Ilay sarintany, izay miova manaraka ny fivoaran'ny tantara hatrany, dia mampivoitra ireo olona be herimpo izay efa nitoraka blaogy sahady manodidina ity aretina ity. Iray amin'ireny mpitoraka blaogy ireny i Maureen Akinyi ao Nakuru, Kenya. Milaza izy fa ny fanafenana anarana rehefa mitoraka blaogy nefa misy VIH/SIDA dia tsy manampy mihitsy ho fampihenana ny fanavakavahana ny tratry ny aretina, ary ilaina ny olona mba hitoraka blaogy amin'ny tokony ho izy tsy amin-tahotra. Ao anatin'ity hafatra  ity dia ambarany fa na ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana hatsaram-bika aza dia afaka manampy hiadiana amin'ny fanamelohana ireo mitondra VIH:
I ukguy dia monina any United Kingdom ary niaina niaraka tamin'ny VIH hatrany amin'ny taona 1980. Nanoratra momba ny zavatra niainany amin'ny maha dyslexic azy izy, mitondra ny otrikaretinaVIH, ” gay” ao amin'ny blaoginy The ramblings. Ao anatin'ity hafatra vao haingana ity  no ilazany fa nanahirana azy fatratra ny nitondra ny aretin'andoha sy ny areti-masony tany amin'ny dokotera.
Pinoy Poz, izay any Philippines no monina, dia nilaza manodidina ny maha “gay” hatramin'ny faha 21 taonany, saingy sivy taona taty aoriana dia “niverina an-dakazery” rehefa nahalala fa mitondra ny otrikaretina VIH. Na eo aza izany, ambarany ao amin'ity hafany  ity ny fahatsapany fa isan'izay tsara vintana izy.
Ireo dia santionany amin'ireo feo maro miakatra ao amin'ny sarintanin'ny Fitorahana blaogy amin'ny tokony ho izy [Blogging Positively map]. Mba ho fandrisihana ireo olona sasany hizara ny tantarany miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA, Global Voices dia namorona ny “Torolàlan'ny Fitorahana Blaogy amin'ny tokony ho izy [Blogging Positively Guide],” izay ahitana toro-hevitra maro momba ny hoe ahoana ny hampiasàna ny blaogy hiresahana ny VIH/SIDA. Miandrandra toto-tànana izahay amin'ny fandrafetana ilay toro-làlana sy/na hahafahana mahazo tamberina, noho izany ireo rehetra liana na efa mampiasa ny blaogy manodidina ity aretina ity dia entanina mba handray anjara, indrindra indrindra fa ireo izay mitondra ny aretina, na ny otrikaretina VIH/SIDA. Miangavy, mifandraisa amiko  na Janet Feldman  raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ny Torolàlan'ny Fitorahana Blaogy amin'ny tokony ho izy [ Blogging Positively Guide] , ny resaka mivantana [chat], na ny sarintany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/22/1578/
 “hampianatra ireo Olona Tiany hampiasa Blaogy na hampiasa ny Micro-Blog,”: https://globalvoicesonline.org/2009/02/11/on-valentines-teach-someone-you-love-to-blog-or-micro-blog/
 33 tapitrisa ny olona: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008-gr-mediakit.asp
 Sarintany Google: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/world-aids-day-2008/
 Andro maneran-tany iadiana amin'ny SIDA: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2008/20081027_WAD_2008.asp
 hafatra vao haingana ity: http://mylifepositive.com/wpmu/ukguy/2008/12/29/sorry-to-make-a-fuss/
 Janet Feldman: mailto:kaippg@earthlink.net